Burcad-badeed Somali ah oo $12 Million oo dollar ku sii daayey markab laga leeyahay dalka Kuwait. – Radio Daljir
Burcad-badeed Somali ah oo $12 Million oo dollar ku sii daayey markab laga leeyahay dalka Kuwait.
Garacad, June, 11 – Koox burcad badeed Somali ah ayaa sii daayey markab laga leeyahay dalka Kuwait, ka dib markii ay qaateen lacag madax furasho ah oo dhan labo iyo tobon Million oo doollarka Maraykanka. Markabka oo ku safrayey calanka dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka shiraacday deegaanka Garacad ee gobolka Mudug.
Markabka MV Zirku oo culayskiisu dhanyahay 105,846 oo tan ayaa lasoo qabsaday 28dii bshii march ee sanadkaan isagoo ka soo shiraacday wadanka sudan islamarkaana ku socday wadanka Singapore.
Markabka MV Zirku ayaa waxaa saarnaa 29 badmaax waxana lagu soo waramayaa in ay dhamaantood badqabaan. ” waxaan sii deynay markabka shidaalka qaada kadib markii aan qaadanay $ 12 million oo doollar oo madax furasho ah, imika ayuuna ka ambabaxay xeebaha Somalia? sidaas waxaa wakaalada wararka ee Routers u sheegay nin burcadbadeedda markabkaasi saarnayd ka tirsan oo magaciisa kusoo koobay Rashiid.
Andrew Mwangura, oo ah sarkaal hore uga tirsanaa urur fadhigoodu yahay dalkaasi Kenya ee qaabilsan dhanka badmaaxida imikana ah tifatire sare oo Somalia report u qaabilsan dhanka baddaha ayaa xaqiijiyey warka siideynta markabkaasi laakiin waxa uu ka gaabsdaay in uu wax faahfaahin ah ka bixiyo in lacag la bixiyey iyo inkale.
Kooxaaha budhacad badeeda Somalida ah oo lacag malaayiin doollar ah ka sameeyey maraakiibta ay ka qabsadaan badweynta India iyo gacanka cadmeed, iyadoo dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxahaasina ay noqdeen hal bacaad lagu lisay. Kooxaha burcad-badeedda ah ee Somalida ayaa khasaare ahaan geliya dhaqaalaha caalamka lacag dhan $ 12 Billion dollar.